Pumphead Factory - Mpanamboatra Pumphead China, mpamatsy
Modely: YZ35 andian-tsarimihetsika ● Ny fitaovany dia PSU izay manana fahombiazana maharitra sy fanoherana ny hafanana avo (150 ° C) ● asidra mahatohitra, soda, saingy tsy misy solvent organika ● Ny ampahany vy dia vita amin'ny vy tsy metaly 304 ● Nivelatra ny velaran-tany miasa. hampihenana ny fikolokoloana fantsona, ary hanatsarana ny ain'ny fantsom-pifanarahana Modely Parameter Teknika Misy fantsom-pivoarana Max rate flow ml / min range Hafainganana hafainganam-pandeha （rpm Fitaovana casing material Rollers NO. milanja ...
Low Pulsation DMD15
Max tahan'ny flow: 2070ml / min 1. Pulse ambany, presion avo 2. Manokana amin'ny fizarana avo lenta sy ny tahan'ny fikorianana kely mameno ny trano 3.PPS, afaka mijoro asidra, alkaly ary solika Orangic Double-famerenam-bidy manakana mba hampihenana ny pulsation amin'ny fomba mahomby sy ny marina dia nohatsaraina latabatra Teknika Model Roller fitaovana roller isa ara-nofo maotera maotera mety tubing max mikorisa tahan'ny ml / min Fahadisoana miverimberina Lanja (kg) DMD15-2A 304 Stainless st ...
Loadin'ny paompy entana haingana KZ35
Max tahan'ny: 11000ml / min Namboarina tamin'ny alàlan'ny indostrialy vita amin'ny vy tsy misy fatrany: manome karazana mode Tubing Retainer roa: Clamper na mety. Fampidirana ny lohan'ny paompy KZ35 dia vita amin'ny vy tsy metaly 304 tanteraka. Namboarina manokana ary novokarina ho an'ny indostrian'ny pharmaceutika sy ny sakafo araky ny mason-tsivana GMP. Ary koa manana ny mampiavaka ny fikorianan'ny be, fandidiana miorina sy azo antoka, fanoherana ny harafesina, miaraka amin'izay ilain'ny mpampiasa azy, azo apetaka ny lohan'ny paompy. Toetra ● Acce ...
Loadin'ny paompy entana haingana KZ25
Max tahan'ny fikorianana: 6000ml / min Fampidirana Rehefa manamboatra fantsona mitovy amin'ny YZ25-1A ny lohan'ny paompy KZ25-1A, dia afaka manome tahan'ny roa heny noho ny YZ25-1A Mamatsy fomba fitehirizana fantsona roa: Clamper na mety. KZ25-1A dia mandray kodiarana vy vy 304 sy fanariana PC. Noho izany dia manome fiasa hita maso Ny sakana famindrana PPS dia misy fanosorana tena hampihenana ny fantson'ny fantsona. Hentitra tsara amin'ny habeny milamina. Fifanarahana simika tsara sy hafanana - mahatohitra. Toetra ● Cartridges sy base can ...
Max tahan'ny: 248ml / min amin'ny 150rpm Misy fantsom-pandrefesana ambony ambany, marina tsara lohany paompy mangarahara hijerena ny fiasa miasa mora vidy sy tsara tarehy, azo apetaka amin'ny takelaka tokana na takelaka ampiasaina indrindra ho an'ny fampiharana OEM Fatra fandrefesana Modely mifanaraka tsara fantsona Max flow rate ml / min Motor hafainganam-pandeha rpm Fitaovana an-trano Fitaovana isan'ny rotera JY15-1A 13 #, 14 #, 19 #, 16 #, 25 #, 17 # 248 ≤150 POM PPS 2/4
taha ambony indrindra: 2200ml / min Model: YZ15 / 25 andian-dahatsoratry ny famolavolana laboratoara, lohan'ny paompy azo stackable Toetra ● Ny fitaovany dia PSU izay misy fahombiazana maharitra sy fanoherana ny hafanana avo (150 ° C) ● Asidra fanoherana, soda, fa tsy solvent organika ● Ny faritra metaly ao anaty dia vita avy amin'ny vy tsy metaly 304 ● Nohalalaka ny velaran-tany miasa mba hampihena ny fitotoan'ny fantsom-pitotoana, ary hanatsara ny fiainan'ny fantsom-pamokarana Teknika Parameter Teknika Misy fantsona Max rate flow （ml / min） ...
Ny lohan'ny paompy DG dia natao ho an'ny tahan'ny mikoriana mikraoba, famindrana tsiranoka marobe amina fantsona ary manome famaritana avo lenta. Mora ny manova sy manamboatra ny fantsona. Ny maotera sy ny kodiarana ratchet dia nohatsaraina mba hanana fiasa tsara kokoa. Afaka manamboatra sy manova fantsona mora foana ny mpampiasa. Toetra ● Ny fanilika dia azo ahitsy kely amin'ny kodiarana ratchet mba hifanaraka amin'ny takin'ny hatevin'ny rindrina samihafa. ● 6-rollers mamatsy lohan-tsofina bebe kokoa. ● Ny 10-rollers dia mampihena ny tahan'ny pulse sy ny mikoriana kely. ● Skillfu ...
Ity vokatra ity dia be mpampiasa ankehitriny lohan'ny paompy mahazatra, ny roller dia vita amin'ny vy vy na PET-TX, casing dia vita amin'ny PC. Ny lohan'ny paompy iray manontolo dia mazava sy mangarahara. Mora ho an'ny mpampiasa ny mandinika ny fiasan'ny paompy Toetra ● Crystal mazava, ambany ny fipetrahana ● Fandidiana miorina sy stackable ● Ny haben'ny compact ● Ny fanesorana ny lohan'ny paompy amin'ny kapila dia ilaina rehefa mametaka ny fantson-tànana ● lohan'ny paompy mahazatra, ara-teknika masontsivana Modely misy ...